एक मान्यता क्लासिक रूपमा लेव Nikolaevich टोलस्टोय, साहित्य पाठ्यक्रम मा विस्तृत अध्ययन गरिएको छ।
तिनीहरूलाई लिखित र सिकाउनुभयो बीचमा अब व्यक्तिगत रूपमा धेरै को काम गर्दछ "को काकेशस को कैदी" छ छन्। योजना एक सानो थप कहानी छलफल गरिनेछ। तर पहिले यस उत्पादन को उद्भव को प्रसङ्ग थाहा हुनुपर्छ।
तपाईं थाह छ, कथा विशेष गरी आफ्नो प्रसिद्ध जो मा टोलस्टोय धेरै वर्ष को लागि काम गरेको छ "एबीसी" को लागि लेखिएको थियो। उहाँले साना पुस्ता तिनीहरूलाई मा ज्ञान को लागि एक तिर्खा जगाउन गर्न, एक लेखक रूपमा आफ्नो प्रतिभा प्रयोग सहित मूल भाषा, को अध्ययन लागि बच्चाहरु सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरण दिन चाहन्थे।
साँच्चै, हामी कोटेशन को कथा "को काकेशस को कैदी" योजना विचार भने, तपाईं षड्यन्त्र अधिकतम सादगी हेर्न र धेरै संक्षिप्त र पहुँचयोग्य भाषा हो गर्न सक्नुहुन्छ। लेखकले छैन आफ्ना समकालीनहरूको त रुचाउनु जो नैतिकता मा जोर, धेरै कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिन्छ। कथा पढेर छोराछोरी, मित्रता, विश्वास, दया र आपसी सहयोग बारे uncomplicated कथा पाउन। यो दृष्टिकोण सम्भव एक पत्थर छैन दुई चरा मार्न गरे।
भाषाको लागि, यो एक फरक कथा छ। टोलस्टोय स्वयम्ले नवीनता शैली औंल्याए, को "एबीसी" को लागि कथाहरू लेख्दा चलाउनुभयो। र समकालीनहरूको अनुसार म यस श्रृंखला मा के भयो को धेरै गर्व छु। विचार र हामी अलि अझ राम्ररी।
फेरि, समकालीनहरूको अनुसार, कथा को तार कारण, योजना सरल र uncomplicated छ, "यो काकेशस को कैदी", ती ठाउँमा आफ्नो सेवा समयमा आफ्नो युवावस्थामा एक लेखक भयो कि एक घटना थियो। तिनीहरूले अन्य Chechens एक अधिक त्यसपछि आफ्नो कथा मा टोलस्टोय विकास भन्दा अहानिकारक संग रन-मा पूरा गर्ने शत्रुतापूर्ण Mountaineers, गयौं छ। यो सक्छन् रूपमा, मामला एक आरक्षित रूपमा लेखक संग, कुनै पनि सम्मानित पेशेवर जस्तै यस क्षेत्र राम्रो कथा परिणाम, र अब छोराछोरीलाई रूसी भाषा राम्रो मास्टर गर्न सिक्दै छन् रहिरहे र हुन।
एक कहानी योजना
इन्टरनेट कोटेशन कथा "को काकेशस को कैदी" को राम्रो योजना हिड्ने छ। तर हामी यो एक सानो थप मा र आफ्नै शब्दमा हेर्न। उहाँले काकेशस मा protagonist रूपमा सेवा गरे। उहाँले भयो एक दिन उहाँले कर्तव्य लड्न थियो जसलाई विरुद्ध स्थानीय Mountaineers द्वारा कब्जा गर्न। उसलाई कैद समय र कैद को परेशानी मा ल्याए जो सँगी साझेदारी। पहिलो जेल कैदीहरूलाई तिनीहरूले सजिलो पर्याप्त थिए जहाँ एक साधारण खलिहान, हुन, त्यसैले एकदम चाँडै गरिएको थियो भाग्न प्रयास बाहिर गरियो।
, उम्कन तिनीहरूले फेरि कारण दोस्रो कैदी को दोष गर्न, फलस्वरूप, एकदम clumsily संगठित, तिनीहरूले पक्रेको थियो र यदि एक विशाल इच्छा कहानी को protagonist, "को काकेशस को कैदी" को स्वतन्त्रता गर्न, भाग्ने सपना बाहिर थियो जो एक प्वाल बसालिएका थिए। दोस्रो भाग्ने योजना उहाँले अझै पनि पिट मा कैदीहरूलाई गर्ने आयोजित छोरी mountaineer को मदद संग, बाहिर लैजान सकिएन। त्यो समय मा दोस्रो कैदी गहिरो उदासीनता थियो र, कि चल्दैन द्वारा र ठूलो गर्नुभयो, र नायक बचत गर्नुहोस्। पछि सबै आफ्नो अघिल्लो असफल स्पष्ट कायरता अभागी सँगी कैदीहरूलाई कारण थिए।
बस एक वा दुई स्ट्रोक मा अद्भुत तस्बिरहरू र डाटा भरिएको, हामी छोटकरीमा dismantled जो को योजना "को काकेशस को कैदी" को कथा। भाषा साँच्चै अनौठो काम गर्छ। पनि स्ट्रोक, चिल्लो र soulful लिखित। म मात्र होइन मास्टर हात, तर पनि के कुशल प्रयोगमा एक रूसी भाषा देखाउन स्पष्ट इच्छा लाग्यो।
यो धेरै आलोचकहरु द्वारा तुरुन्तै कथा को प्रकाशन पछि प्रख्यात थियो। Stylistic सरलता, सन्तुलित शैली, स्पष्ट भाषा, विषय स्पष्ट कथन। "को काकेशस को कैदी" uncomplicated एउटा उदाहरण हो, तपाईं मात्र आफ्नो शिल्प को एक साँचो व्यावसायिक र मास्टर दिन सक्छन्। ornateness सुझावको र विशेष गरी एक मनोवैज्ञानिक subtext बिना शुद्ध गद्य एक हडताली उदाहरण। यो कुरा टोलस्टोय कि बच्चाहरु यो खर्च छैन पक्का थियो, तिनीहरू केवल सत्य चाहनुहुन्छ छ। उहाँले सजिलै दिनुभएको।
तपाईंले जे भन्छन्, उल्लेखनीय लेखक - टोलस्टोय। "को काकेशस को कैदी" - मात्र प्रसिद्ध रूसी क्लासिक को एक उत्कृष्ट नमुना हो। के तपाईं संसारको-प्रसिद्ध moralist को ठूलो पैतृक घण्टौं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यहाँ यो सबै रूसी मानिसहरूलाई रूसी भाषा लागि आफ्नो uncomplicated शुद्धता र प्रेम छ।
आफ्ना समकालीनहरूको धेरै उहाँले स्वार्थी ईर्ष्या कसैले बाहिर कसैले रुचि थिएन। तर, धेरै वर्ष को लागि उहाँले सत्यको च्याम्पियन मा साहित्य, मानिस, सधैं आदर्श लागि देख रह्यो। यस को लागि, शायद उहाँलाई र आलोचकहरु यसलाई पायो। यो सक्छन् रूपमा, मुद्रण शब्द गुणस्तर को उपाय सधैं पुनः प्रिन्ट संख्या छ कि हुन। "को काकेशस को कैदी" को लागि रूपमा, त्यसपछि अब यो संख्या मानिन्छ। तसर्थ, साना पुस्ता र साना लेखकहरूले कसरी ठूलो बनाउन थाहा हुनुपर्छ रूपमा, पनि उच्च रूसी शब्द उकास्न गर्न।
Peggi Syu - पुस्तकहरु र चलचित्र को अमर वर्ण
एउटा सारांश: "Danko" को कथा। "Danko", मैक्सिम गोर्की
विश्लेषण, वर्ण को कैरेक्टराइजेशन र "फोम को भूमि" सारांश
रूसी sociologists - अस्थाइ बन्दि ऐतिहासिक upheavals र राजनीतिक अवस्था
मिंक कोट पार: तस्बिर र समीक्षा
बेहोशी लागि आपतकालीन हेरविचार - यो सबैको जान्नुपर्छ छ!
उदाहरण र प्रमुख taxonomic समूह को विशेषताहरु: बिरुवाहरु को वर्गीकरण
"मरुभूमिमा को सेतो सूर्य" रेस्टुरेन्ट Arkady Novikov
Glycemia - यो के हो? Norma रगत ग्लूकोज असामान्यताहरु र आफ्नो कारण
उपकरण लागि प्राप्त र नियन्त्रण (पीपीसी): नियुक्ति को एक समीक्षा
नागरिक समाज र राज्य: सम्बन्ध बारेमा संक्षिप्त